Hifehy ny kinova sy ny programa misy anao amin'ny Git sy Gitorious | Avy amin'ny Linux
Hifehy ny kinova sy ny programa misy anao amin'ny Git sy Gitorious
Fenriz | | GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ireo fitsapana ireo sy ny valiny dia natao tao amin'ny meta distrikan'i Canaima
Git dia rindrambaiko fanaraha-maso kinova noforonin'i Linus Torvalds, miaraka amin'ny fahombiazana sy ny fahamendrehan'ny fanovana fampiharana rehefa manana rakitra kaody loharano marobe izy ireo.
Gitorious dia anaran'ny rafitra iray hanolorana fampiantranoana ireo tetik'asa fampandrosoana iaraha-miasa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana mifototra amin'ny tontolo Internet izay mampiasa ny rafi-pitantanana kinova aparitak'i Git, ary koa ny rindrambaiko an'ity mpizara loharano misokatra ity izay novolavolaina sy nampiantranoina tao.
Inona no azontsika atao amin'ireo singa roa ireo?
Ireo singa roa ireo dia miara-miasa, miaraka amin'ny git izay fonosinay ny kaody loharano. Miaraka amin'ny Gitorious izahay dia mizara azy amin'ny fomba tsotra sy kanto, mba hahafahan'ireo mpandrindra bebe kokoa mandray anjara amin'ilay tetikasa, amin'ny fotoana itantanana ny kinova izay natao teo aloha ihany.
Ahoana ny fampiasana Git & Gitorius?
Andao hanomboka amin'i Gitorius
Mandehana any amin'ny adiresy www.fitomani.org
Misoratra anarana ary manamafy ny kaonty amin'ny mailaka
Mamorona SSH Key. Ny SSH Key no lakilenay fidirana hampidirana ireo rakitra mankany amin'ny gitorius.
Mba hamoronana lakile fidirana dia mankany amin'ny terminal izahay ary hametraka ny fonosana "sudo apt-get install ssh"
Manatanteraka amin'ny terminal "ssh-keygen" izahay
Manaraka ireo dingana izahay ary mampiditra ny lakile.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, manana ny tenimiafintsika isika, dia hoforonina
Miditra amin'ny lahatahiry /home/usuario/.ssh izahay
Adikao izay ao anaty ilay rakitra id_rsa.pub
Avy eo dia miditra amin'ny fotoam-pivarotan-tsika isika ary mampiditra izay nadikanay tamin'ny "Tantano SSH Keys"
Ankehitriny, afaka mamorona ilay tetikasa amin'ny pejy gitorius izahay. "Mamorona Tetikasa Vaovao", nofenoinay ilay takelaka.
Mamorona ny tahiry izahay, manampy anarana sy famaritana amin'izany izahay.
Miaraka amin'ny GIT izahay izao
Mangataka kopian'ny tetikasa izahay izao.
Mamorona rantsana antsoina hoe "tompo" ao amin'ny toerana fitahirizan-tsika avy amin'ny Gitorious, mihazakazaka:
Adikao ny kaody loharano rehetra an'ny tetikasanao ao anatin'ny lahatahiry ankehitriny:
Ampio ireo fisie vaovao amin'ity sampana ity (master):
Ataovy ity fanovana ity, ny tiako holazaina dia atolory ny fisie rehetra nataonao iray minitra lasa izay:
Hanavao ny tetikasanao ao amin'ny trano fivarotan'i Gitorious:
Misy safidy bebe kokoa amin'ny git, ity no fototra, ahafahana mamorona ilay tetikasa, mampakatra sy manavao ireo rakitra, mazava ho azy fa sarotra kokoa ny git.
Fantatro fa misy ny valiny alohan'ny git fa aleoko toy izany, ary izany no momba ilay lahatsoratra.
Mihatra amin'ny bitbucket ihany koa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Hifehy ny kinova sy ny programa misy anao amin'ny Git sy Gitorious
Mora ampiasaina, raha ny marina, saingy azo antoka kokoa ny manao izany amin'ny Debian noho i Canaima (na dia mitovy amin'ny Ubuntu aza i Canaima, raha ny marina).
Tena tsara, nametraka tao amin'ny debian gitosis + gitweb (ao ambadik nginx) aho ary ny marina dia tena faly aho, ambonin'izany rehetra izany, satria manome / sns ny ekipa tsirairay aho ary manana fanaraha-maso fanovana haingana sy hita kokoa aho, raha tsy hiteny aho.
Mandefasa mailaka amin'ny alàlan'ny console amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka